Nhau - Iyo yepasi rose hove collagen peptides musika yaifungidzirwa pamadhora 271 mamirioni mu2019.
Iyo yepasi rose hove collagen peptides musika yaifungidzirwa pamadhora 271 miriyoni mu2019.
Iyo yepasi rose hove collagen peptides musika yakafungidzirwa pamadhora 271 miriyoni muna 2019. Iyo indasitiri inotarisirwa zvakare kukura paCAGR ye8.2% panguva yekufungidzira nguva ye2020-2025. Hove yakakurudzira kufarira kukuru pakati pemishonga uye nutraceutical vagadziri seyakafuma sosi yezvisikwa zvinoshanda, zvinosanganisira peptides nemapuroteni. Nekuda kwehunyanzvi hwavo hwekuchengetedza ganda nekuchengeta bvudzi, hove collagen peptides dzawana mukurumbira, uye kuenderera kwezvinhu pakati pemabhizimusi aya zvakatungamira vaongorori kugadzira zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye zvine hunyanzvi.
Collagen ndiyo yakakosha puroteni yezvinhu zvinobatika uye mamorekuru ayo anoumbwa netambo nhatu dzepolpeptide, inonzi alpha cheni, inozivikanwa nekutengesa zvinopisa nekuda kwekushandiswa zvakanyanya uye kubatsira kwehutano hwevanhu.
Collagen iboka remapuroteni anowanzoitika. Iyo ndeimwe yeakareba ane fiber maficha emapuroteni ayo mabasa akasiyana neayo epasi rose mapuroteni senge ma enzymes. Iyo yakawanda mune akawanda emusana uye emhuka.
Post nguva: Sep-23-2020